ဝင်္ကပါထဲက သရဲစံအိမ် [Completed] - Surprise ? Season3? - Wattpad
1.2K 206 179
မင်္ဂလာပါ သရဲစံအိမ်ရဲ့ အမာခံ အားပေးသူ ချစ်ရတဲ့ ငယ်လေးတို့ရေ .....❗️
"ဝင်္ကပါထဲကသရဲစံအိမ်" လေး Complete ပြီးကထဲက ငယ်လေးတို့ရဲ့ ဖိဘတ်လေးတွေ ထပ်မမြင်ရတော့ လွမ်းနေခဲ့တာပါ ။ ဟိုတုန်းက ဖိဘတ်တွေနဲ့ အပီဝုန်းခဲ့ကြတဲ့ အချိန်တွေ တကယ် သတိရမိသား ။
အခုတော့ ငယ်လေးတို့ကို ပြောပြစရာ ၊  Surprise လုပ်စရာလေးရှိလို့ Author Note လေးနဲ့အတူ ထပ်မံ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ ။
နောက်ဆုံး ဇာတ်သိမ်းပိုင်းလေး ရေးခဲ့တုန်းက Extra လေး ထပ်ရေးပေးမယ်လို့ ပြောခဲ့တာကို ငယ်လေးတို့ မှတ်မိဦးမယ် ထင်ပါတယ်။
အခုတော့ Extra လေးရေးဖို့ ပြင်ဆင်ရင်းကနေ Idea အသစ်လေး ထပ်မံရရှိလာလို့ အတွေးပြောင်းသွားတာလေးကို ပြောပြချင်လို့ပါ ။
Full Money လေး ၇ ယောက် မြန်မာနိုင်ငံ အလည်အပတ်လာတဲ့အကြောင်းလေးကို ဟာသလေးနှောပြီး Extra အဖြစ် ရေးဖို့ လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ အခု    Extra လေး မရေးဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာ ဦးစွာ အသိပေးပါရစေ။
ဒါပေမဲ့ Extra အပိုင်းတိုလေး မဟုတ်တော့ဘဲ အဲ့ဒီအစား သရဲစံအိမ် Series ရဲ့ အဆက် [Season 3] အဖြစ်နဲ့ Full Money ကောင်လေး ၇ ယောက် မြန်မာနိုင်ငံ သို့ရောက်ရှိလာပြီး လျှောက်လည်ကြရင်းကနေ  သရဲအိမ်ကြီးသို့ မထင်မှတ်စွာ ရောက်ရှိသွားပြီး ခြောက်လန့်ခံရဦးမဲ့အကြောင်းကို ဇာတ်လမ်း တပုဒ်စာ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ခံစားဖတ်ရှုလို့ ရအောင် ရေးသားပေးတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Season 1 ,2 ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ ဘာကွာသွားမလဲဆိုရင်တော့ အခုဇာတ်လမ်းက မြန်မာနိုင်ငံကို ဇာတ်အိမ်တည်ပြီး ဖန်တီးမှာမို့  ရသအသစ်တမျိုး ဖြစ်တည်စေမှာပါ ။ ဇာတ်လိုက်ကျော် ကောင်လေး ၇ ယောက်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရှိ သရဲစံအိမ် ပေါ့ ။ မြန်မာဇာတ်လမ်း မရေးဘူးသေးတဲ့ ကိုယ့်အတွက်လဲ Challenge တခုပါပဲ ။ စိတ်ဝင်စားစရာအပြည့်နဲ့ ဖတ်ရှုလို့ကောင်းအောင် ကြိုးစားဖန်တီးပေးပါ့မယ်။
ဒါ့ကြောင့် Season3က ပိုကြောက်စရာကောင်းမလား ၊ ဘယ်လိုအလွဲတွေဖြစ်ပြီး ရယ်ရဦးမလဲ ၊ မာယာလို လှည့်စားမှုတွေ ကြုံဦးမလား ၊ ဝင်္ကပါလို ထွက်ပေါက်တွေ ပိတ်ဦးမလား ၊ ထူးခြားမှု လျို့ဝှက်ချက်တွေက ဘာတွေ ရှိနေဦးမလဲ ဆိုတာကတော့ "မရဏ စံအိမ်" ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကို စောင့်ဖတ်ပြီး အဖြေရှာကြည့်ကြရအောင်နော် ။